Gịnị kpatara ekwensu enweghị ike iburu aha nsọ nke Meri? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ọ bụrụ na e nwere aha na-eme ka ekwensu maa jijiji, ọ bụ Onye Nsọ nke Meri ma kwuo na ọ bụ ya San Germano n'edemede: "Site na ịkpọku aha gị nke pụrụ ime ihe nile, ị na-eme ka ndị ohu gị nwee nchebe pụọ na mwakpo niile nke ndị iro."
nwekwara Sant'Alfonso Maria dei Liguori, onye nsọ Marian na-asọpụrụ Chineke, Bishọp na Dọkịta nke Ụka (Naples 1/8/1696 - Nocera de 'Pagani, Salerno 1/8/1787), ṅụrịrị ọṅụ, sị: "Olee mmeri mara mma e meriri ndị iro nwere ndị na-efe Meri nwetara site n'omume ọma. nke ya senti mbụ aha!".
Na Rosario anyị na-atụgharị uche na "ihe omimi" nke ọṅụ, ìhè, ihe mgbu na ebube nke Jizọs na Meri, ọ bụkwa ekpere dị ike na nke na-asọ oyi. Ka anyị chọpụtakwuo.
Ekpere kacha ike megide ihe ọjọọ
The Kasị Nsọ Virgin ekpughere gọzie Alain de la Roche (1673 - 1716) na mgbe àjà dị nsọ nke Mass gasịrị, ihe ncheta mbụ na nke doro anya nke Mmasị nke Jizọs Kraịst, e nweghị “nsọpụrụ dị mma na kwesịrị ekwesị karịa Rosary, nke dị ka ncheta nke abụọ na ihe nnọchianya nke ndu na Ochicho nke Jisus Kraist".
Na Rosary aha Mary, Nne nke Chineke na Nne anyị ka a na-ekwughachi ọtụtụ oge, na a na-arịọ arịrịọ ike ya ugbu a na n'oge awa nke ọnwụ anyị, oge awa nke ekwensu ga-achọ ịdọpụ anyị n'ebe Chineke nọ ruo mgbe ebighị ebi.
Nne a, otu o sila dị, onye hụrụ anyị n'anya nke ukwuu, na-ekwe ndị na-echigharịkwuru ya n'ịhụnanya enyemaka ya: karịsịa ndị ga-etinye aka na ekpere nke Rosary nke eluigwe, amara dị mkpa maka ndụ na nzọpụta. Site na gọziri agọzi Alano na San Domenico, Nwanyị anyị kwere nkwa, n'etiti ọtụtụ amara: "Ekwere m nkwa nchebe m na amara kacha ukwuu nye ndị ga-agụgharị Rosary". "Onye nyefere m onwe ya na Rosary agaghị ala n'iyi". “Onye ga-ekpe ekpere Rosary m nke ukwuu, na-atụgharị uche na ihe omimi ya, agaghị emegbu ya site n'ihe ọjọọ. Onye-nmehie, ọ ga-agbanwe; onye ezi omume, ọ ga-eto n’amara wee bụrụ onye kwesịrị ndụ ebighị ebi”.
"Ihe abụọ dị n'ụwa anaghị ahapụ gị, anya Chineke na-ahụ gị mgbe niile na obi nne na-eso gị mgbe niile", Padre Pio.